China Wire Vagadziri uye Vatengesi | Longxiang
Screw uye Anchor
Mbambo dzakakodzwa uye waya weRazor
Yakagadzirwa nesarudzo yakaderera kabhoni simbi waya, kuburikidza newadhi kudhirowa, acid kuwacha uye ngura kubvisa, annealing uye coiling. Yayo yainyanya kushandiswa mukuvaka, mabasa emaoko, yakarukwa waya pajira riya, kuratidza nzira kurira pajira riya, kuputira zvigadzirwa nezvimwe zvinoshandiswa zvezuva nezuva.
Saizi renji: BWG 8-BWG 22
Zingi jasi: 45-180g / m2
Tensile simba: 350-550N / mm2
Hot Dip kwakakurudzira simbi waya
Yakagadzirwa nesarudzo yakaderera kabhoni simbi waya, kuburikidza newadhi kudhirowa, acid kugeza uye ngura kubvisa, annealing uye coiling.
Yayo yainyanya kushandiswa mukuvaka, mabasa emaoko, yakarukwa waya pajira riya, kuratidza nzira kurira pajira riya, kuputira zvigadzirwa nezvimwe zvinoshandiswa zvezuva nezuva.
Zingi jasi: 45-260g / m2
Electro kwakakurudzira simbi waya
Electro kwakakurudzira simbi waya inoitwa nesarudzo nyoro simbi, kuburikidza newadhirowa, waya galvanizing uye mamwe maitiro. Electro kwakakurudzira simbi waya ine hunhu hwegobvu zinc kupfeka, yakanaka ngura kuramba, yakasimba zinc kupfeka, nezvimwewo Izvo zvinonyanya kushandiswa mukuvaka, kuratidza nzira kurira, kusunga maruva uye waya mesh kuruka.
Zingi jasi: 10-18g / m2
Kwakakurudzira Iron Wire Specification
Nhema Yakavharwa Waya: Nhema yakasungirirwa waya inowanzoshandiswa seye indasitiri waya, waya yekuvaka, maindasitiri bale tayi waya uye yekuvaka tayi waya nezvimwe.
Nhema Annealed Wire Rondedzero
PVC Yakavharwa Wire:Kuburikidza nekugadzirisa kwakadzika, iyo epurasitiki uye kwakakurudzira simbi waya yakanyatsobatanidzwa, ine anti-kuchembera, anti-ngura, anti-kutsemuka uye mamwe maitiro.
Diki Coil Waya: Diki coil waya isimbi waya mushure mekurapwa kwepamusoro, pane hombe hombe yesirika kuita diki coil waya, huremu hweiyo diki ichitenderera waya kutonga mu 1-2.2 kg kana zvakadaro, mukushanda kwemuchadenga kuri nyore kutakura.
© Copyright - 2019-2020: Kodzero dzose dzakachengetedzwa. Hot Zvigadzirwa - Sitemap